Askari ka tirsan Dowladda oo Muqdisho lagu toogtay, ninkii dilayna isla goobta lagu toogtay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Askari ka tirsan Dowladda oo Muqdisho lagu toogtay, ninkii dilayna isla goobta...
Askari ka tirsan Dowladda oo Muqdisho lagu toogtay, ninkii dilayna isla goobta lagu toogtay
Muqdisho (Halqaran.com) – Nin ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa galabta lagu dilay Magaalada Muqdisho, daqiiqado ka dib markii uu dilay askari ka tirsanaa Ciidamada Dowladda.
Ninkan oo bastoolad ku hubeysnaa ayaa wuxuu askariga ku dilay Degmada Yaaqshiid, gaar ahaan agagaarka Hotel Lafweyn.
Ciidamada Dowladda oo goobtaasi ka ag-dhawaa ayaa waxaa la soo sheegaya in ay ninkaasi ku baxayn, ka dibna uu dhex maray is rasaasayn. Wararka ayaa sheegaya in ninkaasi uu ku dhintay is rasaasayntaasi.
Goobjooge ayaa wuxuu sheegay in Ciidamada Dowladda ay ninkaasi u diideen inuu goobtaasi ka baxsado, is rasaasayntii dhex martay-na ay sababtay dhimashadiisa.
Ciidamada Dowladda ayaa mid ka mid ah gaadiidkooda dagaalka goobtaasi uga qaaday meydka askariga iyo ninkii kale ee ay dileen.
Arbacadii ayay ahayd markii Ciidamada Dowladda ay Degmada Wadajir ku qabteen laba ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab, ka dib markii ay Suuqa Weyn ee degmadaasi ku dileen askari ka tirsanaa Ciidamada Dowladda.
Tani ayaa waxay yareynaysaa eedeymihii loo jeedin jiray ciidamada ammaanka, ee ku aadanaa inay soo qaban la’yihiin maleeshiyada Shabaabka, kolka ay dilalka ka gaystaan Magaalada Muqdisho.
Nin bistoolad ku hubeysan oo dilay Askari
Shabaab lagu toogtay Muqdisho